Maalinta: 29-ka July, 2017
Kentkart'tan 'maanka gaadiidka dadweynaha magaalada' magaalooyinka '
Waxaa lagu aasaasay 1998, Kentkart wuxuu horumariyaa nidaamyada gaadiidka ee caqliga leh. Shirkadda waxay noqotay sumcad caalami ah oo gudaha iyo dibadaba ah, qaadashada lacagta elektaroonigga ah ee hoos timaadda nidaamka nidaamyada gaadiidka ee caqliga leh, maaraynta baabuurta otomatiga ah, [More ...]
Sida laga soo xigtay go'aanka ay qaadatay Xarunta Isku-xirka Gaadiidka ee Magaalada Istanbul (UKAA); Ordu Street oo ka yimid 30 ilaa 2017 Axaddii maadaama ay ku xiran tahay gaadiidka gaadiidka. [More ...]
Waxaa la aasaasay 1994, Medel Elektronik wuxuu dunida u fidiyaa wax ka badan kun wax soo saar oo leh iibkeeda iyo shabakada suuqgeynta ee ka howlgasha Aasiya, Bariga Dhexe iyo Balkans iyo sidoo kale suuqa gudaha. Laga soo bilaabo 400 [More ...]
LMC Makina, oo leh khibrado ka badan 20 khibrad u leh qaybta qalabka dareeraha iyo pneumatic; Demirçelik wuxuu siiyaa qaybo ka kooban qaybo badan oo kala duwan, laga bilaabo mashruucyada maalgashiga illaa batroolka iyo gaaska dabiiciga ah illaa nidaamyada tareenka iyo dhirta tamarta dabaysha. Alaabada ugu badan [More ...]
Maanta taariikhda: 29 July 1896 Eskisehir-Konya Taariikhda